Shakr: Yenza Iividiyo Zakho Zeshishini Kwi-Intanethi usebenzisa iiTemplate eziMangalisayo | Martech Zone
NgoLwesithathu, Meyi 4, 2016 NgoMgqibelo, uJanuwari 23, 2021 Douglas Karr
Ndonwabile ngokwenene kwinkqubela phambili kwividiyo kule minyaka idlulileyo. Wonke amashishini anethuba lokurekhoda ividiyo kwinkampani yabo, kodwa akukho lula. Ngaphandle komgangatho wevidiyo, ukukhanya kunye nomsindo, kukho umsebenzi wokuvelisa umsebenzi otyhafisayo okanye obizayo. Ndiyakuthanda ukwenza iividiyo, kodwa ndithanda ukuguqukela kubhloga okanye kwipodcasting kuba kulula kakhulu. Ukuze abathengi bethu baphumelele, sibancedile ukuba bakhe ii-studio ukuze bakwazi ukutsiba phambi kwekhamera kwaye bacinezele irekhodi ngokulula.
Ayinguye wonke umntu onobunewunewu beqela levidiyo kwiskripthi, irekhodi, kunye nenkqubo yeevidiyo ukusuka ekuqaleni. Ukuba unezixhobo zokuhlela ividiyo, iisayithi ezinje IVivihi zilungele ukuphonononga kunye nokufumana iividiyo oza kuzisebenzisa kwiiprojekthi zakho.
Kodwa uza kuthini ukuba unekhono lokurekhoda ividiyo kodwa iividiyo zakho azinabuchule bokuyila obenza iividiyo zimangalisa? Nantso isisombululo Shakr uye wakha. Badibanise ingqokelela yeevidiyo ezimangalisayo zeshishini lakho:
Fumana ividiyo ongathanda ukuyisebenzisa-ungayidlala yonke:
Kwaye uvule ujongano lomsebenzisi olulula apho ungatsala kwaye ulahle iividiyo zakho okanye imifanekiso ngokuthe ngqo kwimifanekiso. Akukho sidingo salo naluphi na uhlengahlengiso oluphambili, utshintsho, okanye ubuchwephesha… konke kucwangcisiwe ukuba uthumele ngaphandle ividiyo emangazayo.
Akunyanzelekanga ukuba uhlawulele ividiyo yakho de ube uya kukwazi ukuyijonga kuqala ... into ebaluleke kakhulu eqongeni.
Bhalisela iAkhawunti yasimahla yeShakr
tags: IiVidiyo zeNtengisoshakringqokelela yevidiyoumhleli wevidiyoimizekelo yevidiyoitemplate zevidiyo
Meyi 6, 2016 kwi-4: 30 AM
UDoug, ndiyayithanda ingqiqo oyenzileyo malunga ne-Shakr yokuba ilungele abantu abanokufumana i-footage, kodwa badinga umnxeba wokuyila ukwenza ividiyo emangazayo. Kwa-Shakr, sixhasa kakhulu ishishini levidiyo kunye nezixhobo ezahlukeneyo zokwenza ividiyo kwintengiso. Mna ngokwam ndihlala ndisebenzisa i-Screenflow, Vee ye-iPhone kunye nokunye. I-Shakr inabantu abangaphezulu kwe-1,550 ababhalisiweyo, uninzi lwabo olwenzile umsebenzi weempawu ezinkulu ezinje ngeNike, ezenza ukuba uyilo lwabo lwevidiyo lufumaneke kubasebenzisi bakaShakr ukwenza iividiyo ezimangalisayo ngokudibanisa imifanekiso esele ikhona kunye noyilo lwevidiyo.